ဧရာဝတီ ဖလော်တီလာ ကုမ္ပဏီ - ဝီကီပီးဒီးယား
မြစ်တွင်း၌ မြင်ရသည့် ကုမ္ပဏီမှ သင်္ဘောတစ်စီး
ဧရာဝတီ ဖလောတီလာ ကုမ္ပဏီ (အင်္ဂလိပ်: Irrawaddy Flotilla Company) သည် မြစ်တွင်းသွား ရေကြောင်းလိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်တွင်း၌ လည်ပတ်သည်။ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်များတွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မြစ်တွင်းသွားသင်္ဘောအများဆုံးရှိသည့် လှေအုပ်ဖြစ်ပြီး အစီး ၆၀၀ ကျော် ရှိခဲ့သည်။
၁ စတင် လည်ပတ်ပုံ
၂ တတိယ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ စစ်ပွဲကာလ
၃ ကိုလိုနီ လက်အောက်ကာလ
၁၈၅၂ ခုနှစ် ဒုတိယ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ စစ်ပွဲတွင် ဗြိတိသျှတပ်စုများအား ပို့ဆောင်နိုင်ရန် ဘုရင်ခံချုပ် လော့ ဒါလဟိုဇီက အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီပိုင် မီးသင်္ဘော ၄ စီးကို ကလကတ္တားမှ ရန်ကုန်သို့ ယူလာသည်။ စစ်ပြီးသောခါ မီးသင်္ဘော ၇ စီးအထိ ရှိနေပြီး စာနှင့် အခြားသယ်ပို့မှုများလုပ်ဆောင်ရန် ဆက်လက်ထားရှိခဲ့သည်။
၁၈၆၃ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးသို့ တပ်စုများ၊ ကုန်နှင့်စာများအား ၅ နှစ် သယ်ပို့ခွင့် စာချုပ်နှင့်အတူ ထိုရေယာဉ်အုပ်အား လေလံတင်သည်။ ဂလက်စဂိုမှ တော့ဒ်နှင့် ဖင်ဒလေ ကုမ္ပဏီ (Todd, Findley & Co.) က တစ်သိန်းခွဲနှင့်လေလံအောင်ကာ ၁၈၆၅ ခုနှစ်တွင် စာချုပ်ချုပ်ပြီး ဧရာဝတီ ဖလော်တီလာ ကုမ္ပဏီနှင့် ဘားမိ အက်စ်အန် ကုမ္ပဏီ (Irrawaddy Flotilla Company & Burmese SN Co. Ltd.) ဟူ၍ ဖြစ်လာသည်။ အင်္ဂလန်မှ အခြားလုပ်ငန်းရှင်များက အစုစပ်ပါဝင်ကြကာ ရုံးချုပ်ကို ဂလပ်စဂိုးတွင် ထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရုံးချုပ်မှာ ရန်ကုန်မြို့၊ ပန်းဆိုးတန်းမြို့နယ်တွင် ရှိသည်။ မန်နေဂျာချုပ်မှာ ပက်ဒီ ဟန်ဒါဆန် (Paddy Henderson) ဖြစ်သည်။ ထိပ်ပိုင်းအရာရှိများမှာလည်း အင်္ဂလိပ်များဖြစ်ပြီး စာရေးစာချီနှင့် အနိမ့်ပိုင်းရာထူးများကို မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယလူမျိုးများအား ခန့်အပ်သည်။
၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင် မီးသင်္ဘော ၂၄ စီးနှင့် ဇက် ၂၃ စီးအထိ ရှိလာသည်။ သင်္ဘောသစ်များကို ဒန်ဘာတန် (Dumbarton) ရှိ ဒန်နီသင်္ဘောကျင်း (Denny's Dockyard) တွင် တည်ဆောက်သည်။ ပုံစံထုတ်သူမှာ မန်နေဂျာ ကန်နဒီ ဖြစ်သည်။
တတိယ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ စစ်ပွဲကာလ[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၈၈၅ ခုနှစ်၊ တတိယ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားသောအခါ အင်္ဂလိပ်အစိုးရက သင်္ဘောများကို သိမ်းယူပြီး မင်းလှမြို့ အထက်နှင့်အောက်ကို တပ်စွဲရာ ၂ မိုင်ခန့်ရှည်သည့် သင်္ဘောအုပ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ စစ်သား ၉၅၀၀၀၊ နောက်ပါ ၇၀၀၀၊ သေနတ် ၇၇ လက်နှင့်၊ စားနပ်ရိက္ခာအဖြစ် တိရိစ္ဆာန်များကိုပါ တင်ဆောင်ထားသည့် ၎င်းရေတပ်အား ကြီ:ကြပ်သူမှာ ဗိုလ်ချုပ် ပရင်ဒါဂတ် (General Prendergast) ဖြစ်သည်။ ကပ္ပတိန် ဘက်ကတ် (Beckett) ဦ:စီ:သည့် ပဲလိုးမီးသင်္ဘော (P.S. Paelow) က သင်္ဘောအုပ်ကို ဦးဆောင်ကာ နိုဝင်ဘာ ၁၇ တွင် မင်းလှခံတပ် ကို သိမ်းသည်။ ဤနေရာသည် သီပေါမင်း၏ နောက်ဆုံးခုခံခဲ့သည့်နေရာဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၂၇ တွင် အညံ့ခံသည်။ ကပ္ပတိန် ပတ်တာဆန် (Patterson) မောင်းနင်သည့် သူရိယမီးသင်္ဘော (P.S. Thooreah) ဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် သီပေါမင်း၊ စုဖုရားလတ်၊ သမီးတော်နှစ်ပါး၊ စုဖုရားကြီးနှင့် ဆင်ဖြူမရှင် မိဖုရားကြီ:တို့အား ကာနယ် စလေဒင် (Colonel Sladen) က ခေါ်ဆောင်ကာ အိန္ဒိယအနောက်ဘက်ကမ်းရှိ ရတနာဂီရိ (Ratnagiri) သို့ ပို့ဆောင်လိုက်သည်။
Strachan, Paul (2003) "Pandaw: The Irrawaddy Flotilla Co. and the Rivers of Myanmar" Kiscadale Publications. ISBN 1870838424.
McCrace, Alistair; Prentice, Alan (1977). "Irrawaddy Flotilla" James Paton Limited. ISBN 0950606103.
↑ Irrawaddy Flotilla Company
↑ (1973) The Irrawaddy Flotilla Company 1865-1950. Greenwich, London: National Maritime Museum။
↑ ညိုမြ, "ကုန်းဘောင်ရှာပုံတော်", မြန်မာစာပေတိုက်, ၁၉၈၂ မေ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဧရာဝတီ_ဖလော်တီလာ_ကုမ္ပဏီ&oldid=442217" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၀၂:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။